Fifandraisan-davitra: tambajotra vaovao ataon’ny Sinoa | NewsMada
Fifandraisan-davitra: tambajotra vaovao ataon’ny Sinoa
Natao sonia, omaly, teto Antananarivo ny fifanarahana mikasika ny tetikasa fanatsarana ny tambajotra fifandraisan-davitra eto Madagasikara. Fifanarahana nataon’ny Praiminisitra Ntsay Christian, nisolo tena ny governemanta malagasy sy ny ambasadaoro SEM Rtoa Yang Xiaorong, nisolo tena ny governemanta sinoa.
Voafaritry ny tetikasa ny hametrahan’ny Sinoa, tambajotra fifandraisan-davitra vaovao eto Madagasikara, amin’ny alalan’ny « fibre optique ». Eo koa ny hananganana foibe fitanana ny antontam-baovao sy antontan-kevitra niomerika (Data base), hanatsarana ny fitantanan-draharaham-panjakana niomerika (e-gouvernance), sy ny fikarakarana ny vahoaka manan-draharaha. Hanamora ny fametrahana fifandraisan-davitra niomerika amin’ny tetikasa tanàna vaovao Tana-Masoandro izay hanomboka tsy ho ela koa ny fametrahana ireo fotodrafitrasa ireo.
Nanamafy ny praiminisitra, manaraka ny toetr’andro sady mampaharitra ny fampiasana ny e-gouvernance, ary miteraka tombontsoa ho an’ny vahoaka. Nomarihiny koa fa tafiditra ao anatin’ny firoboroboan’ny fiaraha-miasa eo amin’ny governemanta roa tonta ity fifanarahana ity, taorian’ny fitsidihan’ny praiminisitralefitra sinoa teto Madagasikara, fotoana vitsy lasa izay. Anisan’ny efa ataon’ny fanjakana sinoa eto amintsika ny fampitaovana samihafa ny tanàn-dehibe, toy ny eto Antananarivo, hiantohana ny fandriampahalemana.